Ithegi: ukubhankisha | Martech Zone
Ukukhangela lulwimi lwendalo iphela. Kwaye ibhokisi yokukhangela isisango kuzo zonke iimpendulo zakho. Ekhaya ukuphupha malunga nesofa entsha yendlu yakho? Iindawo zokulala ezingcono zikaGoogle kumagumbi amancinci. Emsebenzini uzama ukunceda umthengi ukuba aqonde ukhetho lwabo lokubhalisa? Khangela i-intranet yakho ngamaxabiso asemgangathweni kunye neenkcukacha oza kwabelana ngazo. Ekusebenzeni okuphezulu, khangela kwaye ukhangele ukukhulisa phezulu nangaphezulu. Abathengi bathenga ngakumbi kwaye bahlala benyanisekile,
NgoLwesine, Meyi 14, 2020 NgoLwesine, Meyi 14, 2020 Douglas Karr
I-Methodify liqonga lophando lwemarike oluzenzekelayo kwaye yenye yezinto ezimbalwa kwihlabathi jikelele ezenzelwe ngokukodwa inkqubo ezenzekelayo yophando. Iqonga lenza ukuba kube lula kwaye kukhawuleze iinkampani ukuba zifikelele kulwazi olubalulekileyo lwabathengi kuwo onke amabakala okuphuhliswa kwemveliso kunye nenkqubo yokuthengisa ukuze kwenziwe izigqibo ezingcono zeshishini. Ukuthatha inyathelo elinye ukuya phambili, i-Methodify yenzelwe ukuba yenziwe ngokwezifiso, inike iinkampani ingxelo yabathengi kulo naluphi na uhlobo
Ndingabelana ngamabali amabi oyikisayo kwimbali yam ngeebhanki kunye namakhadi etyala. Eminye yayo iyimpazamo kodwa uninzi lwayo zizenzo ezihlekisayo zeebhanki. Ndiyazibuza ukuba balala njani aba bantu ebusuku… iingeniso ezinkulu, izibonelelo ezikhutshwayo, iibhonasi eziphezulu kunye nemirhumo yokuhlekisa engakhange ibashukumise ukuba baphucule iinkqubo zabo. Nanku umzekelo omkhulu… ikhadi lam letyala lishicilelwe kabini xa useluhambeni.